‘जनतालाई भ्रममा पार्न पशुपतिनाथको दर्शन’ « रिपोर्टर्स नेपाल
‘जनतालाई भ्रममा पार्न पशुपतिनाथको दर्शन’
प्रकाशित मिति : 2021 April 2, 12:46 pm
चित्रबहादुर केसी: मुलुक संकटको भुमरीमा परेको छ । यसको मुख्य दोषी नै केपी शर्मा ओली हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर उहाँले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो । अहिले फेरि न्यायालयले गर्ने काम आफैं गर्ने गतिविधिहरू हुन थालेको छ । न्यायालयले गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्न थालेको छ । धमाधम मुद्दा फिर्ता गर्न थालिएको छ । फौजदारी अपराध गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिएर न्यायालय नै नचाहिने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ । कार्यपालिकाले सबै गर्ने हो भने न्यायपालिका किन चाहियो ?
अहिले फेरि चुनावको कुरा उठाइएको छ । देशमा चुनाव किन चाहियो ? पाँच वर्ष वामपन्थीलाई सरकार चलाऊ भनेर जनताले म्यान्डेट दिएका छन् । जनताको म्यान्डेट नमानी जबर्जस्ती चुनावमा जाने कुरा मान्य हुन सक्दैन । चुनाव गरेर देशमा ४० अर्बको भार पार्ने । फेरि ठेकेदारहरूलाई संसद्मा लाने ? अहिले चोर फटाहा जे भए पनि प्रतिनिधिसभा राखेमा देशलाई ४० अर्बको भार त पर्दैन । पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने चुनाव तीन वर्षमै गरेर पैसाको खोलो बगाउन खोजेको । देशमा यत्रो आर्थिक संकट छ । कोरोना महामारीले जनतालाई यत्रो समस्या छ । युवाहरू बेरोजगार छन् । उनीहरूका लागि यो पैसा खर्च गर्नुपर्छ । चुनावमा खर्च गर्ने बेला होइन यो ।
अहिले देशमा अनेकन भ्रमहरू फैलाउन खोजिएको छ । वामपन्थी भनिएका नेताहरू धमाधम पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गइरहेका छन् । उनीहरूको आस्था त्यतातर्फ होइन । भित्री मनले पशुपतिनाथ पुगेका होइनन् । उनीहरू जनतामा भ्रम फैलाउन चाहन्छन् । केपी ओली त हिन्दूलाई आकर्षित गर्न यसो गरिरहेका छन् । उनले यो सबै भ्रम छरिरहेका हुन् । यसबाट सबै सचेत हुनुपर्छ । माधव नेपाल पनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएको देखियो । उनी पनि भित्री इच्छाले पुगेका होइनन् । अब हिन्दूहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्न यसो गरिरहेका हुन् । यस्ता भ्रमहरू देशमा धेरै देखिइरहेका छन् ।
देशमा सहमतिको सरकारको आवश्यकता छैन । पृथकतावादीलाई सरकारमा ल्याउने ? सौदाबाजी गरेर सरकार टिकाउन खोज्ने ? वामपन्थीहरू नै मिलेर सरकार चलाउनुपर्छ । यसका लागि ओली हट्नुपर्छ । ओलीको ठाउँमा अर्को कुनै वामपन्थी नेताले सरकार चलाए भइगो । ओलीले राजीनामा दिएमा त्यस्तो सम्भावना बन्छ । जनताले मत दिएर वामपन्थीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाऊ भनेकाले चलाउनुपर्छ । अर्को विकल्पमा जानु हुँदैन ।
अन्त्यमा, रिपोर्टर्स क्लब नेपाल २३औं वर्षमा प्रवेश गरेकोमा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले जल्दोबल्दो विषयमा जहिले पनि बहस गरेर जनतालाई सुसूचित गर्दै आएको छ । भविष्यमा पनि रिपोर्टर्स क्लब अविरल रूपमा आफ्नो पाइलामा अगाडि बढोस् ।-राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको यो विचार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्मारिकामा प्रकाशित छ File Photo/Mukunda Kalikote-ReportersNepal